WARARKII DHAQAALAHA TOGAHERER( IMF OO BAAQ SOO SAARTAY ) | Toggaherer's Weblog
Pakistan 04 March 2009 (THN)
Waxaa Baaq soo saaray Ururka IMF (International Monetary Fund) taas oo ay ka hadleysay xaladaha dhaqaleed ee wadamada soo kooriya.IMF ayaa sheegtay in aay u baahan yihiin Deeq lacageed gaadhaysa $25 billion taas oo u dhiganta 18 Billion oo Pound oo ah Lacagta Ingiriiska sanadan oo kaliaya.
IMF waxay ku sharaxaday Arintan Dhaqaalo Xumadadii sadexaad oo dhibaato kuu keentay Caalamaka ila sanadkan kadib markii uu saameeyay markii ugu horeysay Hormarka dhaqaale tan labaadna Dhaqaalaha Reer yurub.
IMF ayaa ku baaqday in Wadamada Deeq bixiyayaasha aanay jariin taageerada ay Dalalka sadeexad siiyaan.
Warbixintan ay soo saartay IMF ayaa sheegaysa in kabadan 20 Dal oo kala badh ku yaalaan Qarada Afrika ayay uu bahan yihiin deeg deg deg ah.
Madaxa IMF Mr. Dominique Strauss-Kahn ayaa sheegay wadamada ay kamidka yihiin Angola, Ghana, Honduras, Kyrgyzstan , Moldova, Mongolia, Nigeria, Papua New Guinea, Sudan iyo Vietnam ayaa qarka u saran yihiin ka soo kabsasha la’aanta Dhaqaale ee ku sii koordhayso, Faqriga oo sii badanayaa iyo xiisadaha Siayaasada .
Mr Strauss-Kahn waxaa uu ugu baaqay deeq bixyayaasha in ay bixiyaan lacagta looga fadhiyo si looga hortago xiisado Bani’aadantinimo kuwii ugu xumaa in aysan ka dhacin Wadamadan kor ku xusan.
IMF oo 185 Dal xubin ka yihiin ayaa sheegtay in ay horeyba u sii kordhaysay taageerada loogu oglaanayo Daqli wadamada Soo kooriyaa sanadkii la soo dhaafay .
IMF ayaa hore u balan qaday in ay wax ka qabanayso dhaqalo xumada ka jirta addunka khasataan Dunida saddexad lakiin IMF waxay ku eedaysanaya Dallak Dhaqaalaha bixiya in ay yihiin kuwa la gaabinaya Deeqda.
Xafiiska Dhaqalaaha TogaHerer